Apple fireres mainjiniya ane mwanasikana akaonesa off iPhone X achishanyira baba | IPhone nhau
Mazuva mashoma apfuura, mumwe wangu Jordi akaburitsa chidimbu chenhau umo taigona kuona kuti musikana wechidiki akafamba sei achitenderera Apple Campus ndokushanyira baba vake, avo panguva iyoyo vaishanda sainjiniya kuApple. Muvhidhiyo, mukadzi wechidiki anozvinyora achitizivisa zvaari kuronga kuita zuva rese, asi chinonyanya kunakidza chinobva paminiti 2, apo mwanasikana anoshanyira baba vake, uye pavanenge vachidya, ndiye inobata yababa vake X X voitaridza kukamera vachivhura maapplication mashoma. Chakaita kunge chiito chidiki, chapera nekudzingwa kwababa vake.
Nguva pfupi mushure mekunge vhidhiyo yaitwa pachena uye nehutachiona, Apple yakatumira email kune mukadzi wechidiki, Brooke Amelia Paterson achimukurudzira kuti abvise vhidhiyo kubva kuYouTube (kunyange ichiri kuwanikwa pane mamwe maakaundi eYouTube) chimwe chinhu chaakakurumidza kuita kuyedza kumumisa baba vaive nezvinetso nekambani. Asi zvakange zvanyanyisa. Brooke akatumira vhidhiyo nyowani munzira yake yeYouTube maanotsanangura izvo zvakaitika, kumashure zvishoma kubva pahupenyu hwake uye izvo baba vake mainjiniya aishanda mukuvandudza kweiyo iPhone X akadzingwa basa.
Chikonzero chekudzingwa, sekureva kweiyo Brooke vhidhiyo nyowani, ndeyekuti baba vake vakatyora mitemo yakagadzwa naApple, kusanganisira nenyaya yekuti kurekodha hakubvumidzwe paCampus, kunyanya kana chiri chigadzirwa chisati chavepo.pamusika . Vhidhiyo yacho yakaonekwa kuratidza QR kodhi dzevashandi vekambani. Uye zvakare, mukushandisa kweManotsi, ivo vakasanganisira Chigadzirwa mazita ayo Apple haasati azivisa zviri pamutemo.
Kana isu tikatarisa vhidhiyo, iyo yandinosanganisira pazasi, uye isu tinomira paManyorerwo application, haugone kuverenga chero chinhu chakajeka zvakanyorwa pavari, muchokwadi, zvinoita sekunge ivo vakambosvibiswa vasati vaturika vhidhiyo. Haisi yekutanga iyo mushandi wekambani yehunyanzvi anopedzisira adzingwa. Mazuva mashoma kuburitswa kweXbox, mushandi weMicrosoft akaburitsa mimwe mifananidzo yezvakange zvakaita, izvo zvakatungamira mukudzingwa kwake padhuze. Injiniya anga ave neApple kwemakore mana uye anga ari chikamu cheboka iro rakabatsira kugadzira isina waya kutaurirana sisitimu ye iPhone X.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple moto mainjiniya ane mwanasikana akaonesa off iPhone X paanoshanyira baba
Ini handizive kana baba kana mwanasikana vane huremu hwepfungwa. Ndine kukahadzika.
Pindura kuna elessar
Inofanira kumhanya mumhuri, iwe unofanirwa kuve wakapusa.
Zvingave zvakaoma kuzivisa anokunda. Vane yakawanda mwero.
heino katsi yakavharirwa ... kukanganisa kunyora ...
Icho chinhu chakapusa. Dambudziko risingafadzi retard. Ivo baba havagone kuve kuti ivo havana kunge vazviziva, zvakaitwa muhana yeinjiniya pachavo asi, ivo vanofanirwa kuve vanofinhwa nemari iyo yavakashandisa zvese zvematongerwo enyika nekushushikana!
Zvakanaka, ndine urombo nemusikana uyu. Ini ndinomuonawo seakasikwa uye akatendeka. Ini ndinonzwisisa faindi pamwe. Mwedzi yakati wandei musina mubhadharo ... asi kumudzinga ... zvinoita kunge kuwandisa. Kambani inozvirumbidza kuve munhu… haigone kuita kutsamwa kwakadaro kunokanganisa kugadzikana kwepfungwa kwemhuri yese. Ndinovimba vanofunga zvakare uye… maona, nekuwedzera, mune yakasarudzika mafungiro… mukana wekushambadzirwa kwakanaka kwechiratidzo chaive mureza wehunyanzvi hwehunhu. Ndinovimba ino gadzirisa zvakare inodzivirira hunhu hwevanhu nekugadzirisa izwi rechiito kukura kana kuregerera.
Google ichabhadhara zviuru zvitatu zvemamiriyoni kuti ive injini yekutsvaga yeIOS